वि.सं. २०७६ असार १४, शनिबार, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > वि.सं. २०७६ असार १४, शनिबार, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य यस्तो!
admin June 28, 2019 June 28, 2019 Uncategorized 0
आजको- पञ्चाङ्ग: वि.सं. २०७६ असार १४, शनिबार,इ.स. २०१९ जुन २९,शकसंवत् १९४१,परिधावी संवत्सर,उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ने.सं. ११३९ तछलागा, आषाढ कृष्णपक्ष, द्वादशी, २८:०१ उप्रान्त त्रयोदशी, नक्षत्र– भरणी, ८:११ बजेउप्रान्त कृत्तिका,योग– धृति, २०:५७ बजेउप्रान्त शूल,करण– कौलव, १६:०६ बजेदेखि तैतिल, २८:०१ बजेउप्रान्त गर,आनन्दादिमा ध्वांक्ष योग,चन्द्रराशि– मेष, १४:२३ बजेउप्रान्त वृष, सूर्योदय– ५ :१२ बजे, सूर्यास्त– १९:०२ बजे र दिनमान ३४ घडी ३ पला। व्रत/पर्व-वैष्णवहरूकाे योगिनी एकादशी व्रत, ८:११ बजेदेखि त्रिपुष्कर याेग २८:०१ बजेसम्म।
राम्रा पहिरनले अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफुलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेछ । नया कामको प्रस्ताब आउनेछ भने नया प्रकृतिको काम थालनि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । परिवारका साथ मिष्टान्न भोजनका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ । धर्म तथा यस्तै कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर जुर्नेछ । साझपख खानपानमा ध्यान दिनुहोला ।
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने तथा औषधि उपचार खर्च बढेर जाने योग रहेको छ । शैद्धान्तिक बिषयमा आफन्त तथा अग्रज ब्याक्तित्वहरु सँग बिवाद सिर्जना हुनेछ । मध्यान्हबाट अप्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना बनाई अगाडि बढ्दा सफलको सिडि चड्न सकिनेछ । व्यापारमा बृद्धि भएर जाने हुँनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँन सकिनेछ । व्यापारमा सानो लगानि गर्दा पनि मनग्गे धन आर्जन हुनेछ ।
बिद्या तथा प्रतिष्र्धामा बिजय हुँने योग रहेकोछ भने नयाँ ज्ञान हासिल हुनेछ । बुवा वा बुवासरहका मानिसको आषिर्वाद तथा सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । माया प्रेममा एक अर्कालाई भेटि सौहार्दपुण बाताबरणमा समय व्यातित गर्न सकिनेछ । ईच्छित कामनाहरु पुरा हुँने तथा आफ्नो मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सामानहरु प्राप्त हुनेछ । साझपख लामो दुरिको यात्रा हुनेयोग रहेकोछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) =
मुद्दा मामिला तथा न्यायलयबाट हुँने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । वादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । माया प्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् गसिलो भएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्या भए समाधान भएर जानेछ । साझपख यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
हिम्मतका साथ काम गर्नाले सत्रु तथा प्रतिष्पर्धिहरुलाई सजिलै किनारा लगाउन सकिनेछ । सञ्चार तथा मिडिया जस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानि फस्टाएर जानेछ भने नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना कुराहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले आफन्त तथा अग्रजसँग राय बाजिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘डमी बम’ डिस्पोज, आधा घण्टा उडान अवरुद्ध
दुःखद खबरः आँधी खोलामा डुबेर एक ८ बर्षिय बालकको मृत्यु